Best Reishi polysaccharides luthathe yoMvelisi kunye Factory | Umthetho
Ikwabizwa ngokuba yiDanzhi, iyakrakra kwaye ayiyityhefu. Iphatha iqhina le-thoracic kunye neQi. I-mushroom yeGanoderma lucidum ibizwa ngokuba yi-ganoderma lucidum ingca. Yeyam polyporaceae kwaye yenye yokungunda amayeza. I-mainfeature yimilo yezintso yeambrela, isetyhula esecaleni okanye kufutshane-isetyhula, bomvu-bumdaka ngombala obengezelayo. Isitampu kunye neambrela zinombala ofanayo mnyama.
Ngokwe-Compendium ye-Materia Medica, i-ganoderma lucidum inendalo ethe tyaba, incasa ekrakra, engenatyhefu kunye neqhina lentliziyo. Yondla intliziyo, yondla embindini, yandisa ubulumko, iphucula inkumbulo, igcina isencinci kwaye iyolula unyaka ixesha elide.
Ukuphucula intliziyo-qi-iGanoderma lucidum iphucula i-myocardial microcirculation kwaye ilawula i-lipids yegazi. Isetyenziselwa ukunyanga i-hyperlipidemia kunye nesifo sentliziyo.
Yandisa ubulumko kwaye uphucule inkumbulo- Inokunyanga i-neurasthenia, ukulala, ukuphucula imemori.
Zigcine umncinci kwaye uzolula unyaka ixesha elide-iGanoderma lucidum ine-anti-oxidation, isimahla yokuqhekeza kunye nokuchasa ukuguga.
Ukuqinisa isisu-isisu kunye nokuzalisa qi-Ganoderma inokulawula ukusebenza komzimba kunye nokuphucula imisebenzi yeenkqubo zomzimba ezibalulekileyo ezinjengentliziyo, imiphunga, isibindi, izintso, njl.
Isicwecwe samakhowa, amakhowa endalo
Ifom: Powder, Raw materail / Powder / Powder / Slice
Icandelo: Isiqhamo somzimba
Uhlobo lokukhupha: Ukukhutshwa okuSelidi-okuqinileyo
Packaging: Ibhotile, Isikhongozeli seplastiki, ibhegi / ulwenziwo
Indawo yokuQala: Fujian, China
Igama lebrand: Wuling
Inombolo yomzekelo: LZQP-106
Umgca weMveliso: I-Organic Juncao Reishi Mushroom
Isithako esisebenzayo: IPolysaccharide; Indawo yokubeka
I-OEM kunye nesampulu yasimahla: Iyafumaneka
Umsebenzi: Ukuzikhusela komzimba / ukungadinwa / ukunceda ukulala
Umbala: Mthubi omthubi
Ukugcina: Gcina kwindawo epholileyo neyomileyo
1000000 Ton / Iitoni Unyaka ngamnye
Ukupakishwa kweplastiki ngobuninzi; imigqomo; iingxowa;
Uhlobo lweMveliso: I-Organic Juncao Reishi / Ganoderma lucidum / iLingzhi Mushroom
Ifom: Isiqhamo somzimba / iSlice / iPowder / okrwada
Indawo yokuthengisa: Itekhnoloji yeJuncao yeOrganic ukuCwangcisa kunye neNkqubo
Isikhokelo: Ukuvuselela ngamanzi ashushu okanye ukongeza kwisobho
Isithako: Polysaccharidel; benyanycet.etc
1. Ukuphucula amajoni omzimba;
2. Nciphisa iswekile yegazi kwaye ukhusele iiseli;
3. Ncedisa ukwetyisa, ukugcina amanani;
4. Ukuphucula ukulala, kukwenza uzive unomoya ngakumbi;
Itekhnoloji yeJuncao ithintela ukuphazamiseka okuninzi okubangelwa kukusika enkulu.
Ubuninzi bemithi, kwaye ayinangxaki yongcoliseko lomhlaba okanye ungcoliseko olunzima lwentsimbi.
Egqithileyo Chaga Khipha Powder
Okulandelayo: Iingonyama ze-Organic Lions Mane Iicapsule zokukhupha
Iipesenti ezingama-50 zePolysaccharides
Iipesenti ezingama-50 zePolysaccharides Uv
UGanoderma Lucidum Polysaccharide